Vavaka ho an'ny fanolorana sy ny fahafolonkarena. ? Ohatra mahery
Ny vavaka hatao fanatitra Amin'izao fotoana ozakantsika ny fananantsika alohan'ny fanatrehan'ny Tompo dia tena zava-dehibe izany.
Ny fanomezana dia azo avela eo amin'ny alitara na trano fitehirizam-piangonana na azontsika omena mivantana amin'ny olona manokana izy ireo saingy tokony hotadidintsika foana fa mendrika ny ampahany amin'ny vola ara-bola ny Tompo.
Fitsipika ity no hitantsika ao amin'ny Baiboly ary mitondra fitahiana tsy hita isa ao amin'ny fiainantsika. Amin'ny fanaovana fanomezana dia manome fahasoavana izay azontsika amin'ny fahasoavana ary tokony atao am-pifaliana satria izany no mpanome tsoahan'ny Tompo azy.
1 1) Vavaka ho an'ny fanatitra sy fahafolon-karena
2 2) Vavaka hanolorana an'Andriamanitra
3 3) Ohatra vavaka ho an'ny fanatitra
3.1 Inona no atao amin'ny vavaka?
3.2 Ahoana ny fomba hivavahana hahazoana fanatitra kristiana?
1) Vavaka ho an'ny fanatitra sy fahafolon-karena
«Ry Ray any An-danitra,
Androany isika dia mitondra ny fanomezantsika tsara indrindra amin'ny vola miditra sy ny famokarana.
Nosarahinay ampahany ny vola azontsika, araka ny ohatry ny nahazoanao anay.
Zahao am-pifaliana izay atolotray anao anio.
Efa nampanantena anay fa hanompo anao izahay, koa an-tsitrapo no entinay manolotra ny fanatitray.
Takatray fa fotoana fohy eo anoloanao io, ary manaja am-panajana izay atolotray antsika ankehitriny.
Andriamanitra ô, manome ny voninahitra noho ny anaranao izahay; Izany no antony itondranay ireo fanatitra ireo ary tonga any amin'ny kianjanao.
Misaotra anao tamin'ny fanadiovana sy ny fanadiovana ny fiainanay, satria androany takatsika fa ny fanatitra dia atolotra amin'ny fahamarinana amin'ny fahalehibiazanao sy ny fiandriananao.
Enga anie ny hankasitrahana ny fanompoam-pivavahanao ho mahafinaritra anao.
Izahay dia manome ny voninahitra noho ny anaranao rehefa mitondra ny fanatitra hohaninay sy tonga eo anatrehanao izahay; midera anao aho ry Tompo!
Ankehitriny isika dia hifaly amin'ny fanomezana fanomezana an-tsitrapo, satria amin'ny fo manontolo no anaovantsika izany.
Ataovy am-bavaka amim-pinoana lehibe ity vavaka ity.
Ny fanomezana sy fahafolon-karena dia fitsipika ara-baiboly izay tsy azo amin'ny alàlan'ny fanambarana ihany satria matetika fanakianana izay manana ireo fitsipika ireo ary mampihatra azy ireo amin'ny fiainany andavanandro.
Ao amin'ny Baiboly dia hitantsika fa ny olona nametraka ny ampahafolon-karena dia olona miroborobo amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana.
Ny fanomezana dia mety ho izay rehetra avy ao am-pontsika, fa ny ampahafolon-karena, an'ny Tompo, dia ampahafolo ny tombony azontsika, na vola na tsia.
Ny teny dia mampianatra antsika fa Andriamanitra mihitsy no miteny mafy ny mpandringana raha toa ka mankato isika amin'ny fanomezana ny fahafolonkarena amin'ny fotoana mety sy amin'ny fo feno fifaliana.
2) Vavaka hanolorana an'Andriamanitra
«Misaotra anao ny Tompo noho ny nomenao ahy, noho ny zava-drehetra nataonao ahy.
Fantatro fa indraindray tsy dia mankasitraka anao betsaka aho fa izao dia hahita ahy.
Izay rehetra novoiziko androany dia nisaotra anao.
Nataonao ho olona tsara kokoa aho.
Misaotra an'ireo fianakaviako, namako, olona akaiky anao aho.
Misaotra anao nanome ahy fiainana iray andro bebe kokoa,
Andro iray hidera sy hiankohoka aminao, ho tia anao.
Raha tsy misy izany dia tsy hisy olona, ​​misaotra Tompoko.
Tsy afaka mandoa ny trosako aminao aminao aho, handoavana ny zava-drehetra nomenao ahy.
Ny fanatitra, na dia avelantsika ao amin'ny trano fitehirizam-bokatra aza na omena olon-kafa izany, Ilay Andriamanitra iray ihany no mandray azy any an-danitra ary homeny antsika ny valiny araka ny harena ananany amin'ny voninahitra.
Ny antso dia ny hanao ny sorona amin'ny fo falifaly satria ny teny milaza amintsika fa mitahy ny mpanome mahafaly izy, noho izany dia tsy afaka manome zavatra amin'ny fo feno fangidiana isika fa faly amin'ny fanomezana.
3) Ohatra vavaka ho an'ny fanatitra
Androany isika dia mitondra ny fanomezana sy ny fiantrana rehetra arakaraka ny vola miditra sy mihatra.
Nosokafantsika ampahany ny vola azontsika,
mitovy ihany ny ampahany nomenao anay hampivoatra anay.
Zahao am-pitiavana sy tiavo izay atolotray anao anio.
Efa nampanantena anay fa hanompo anao izahay,
Izany no antony anoloranay an-tsitrapo sy tsy mandray tena ny fanatitray.
Azonay fa fotoana tsy fanao eo anoloanao io,
ary miahy sy mitandrina izay atolotray antsika ankehitriny.
Andriamanitra ô, manome ny voninahitra noho ny anaranao izahay;
Izany no antony itondranay ireo fanatitra ireo ary tonga any amin'ny tempolinao.
Misaotra anao amin'ny fanalefahana, ny fanadiovana sy ny fiarovana ny fiainanay,
satria ankehitriny takatsika fa ny fanatitra dia atolotra amin'ny fahamarinana amin'ny fahalehibiazanao sy ny fiandriananao.
Izahay dia manome ny voninahitra avy amin'ny anaranao rehefa mitondra ny sorona entinay sy tonga eo anatrehanao izahay dia hiankohofanao, Tompo ô
Ankehitriny dia hifaly isika amin'ny fanomezana fanomezana an-tsitrapo sy fanomezana, satria amin'ny fo manontolo no anaovantsika izany.
Amin'ny anaran'i Jesosy.
Toy izany no ahitantsika fa feno ny tenin'Andrimanitra feno ohatra maro tsy tambo isaina. Ny iray amin'izy ireo sy ny matanjaka indrindra dia mahita azy ao amin'ilay Abrahama izay antsoina hoe rain'ny finoana ihany koa, nosedraina ary nahavita nanolotra ny zanany lahy raha tsy Tompon'ny zanak'omby ny Tompo.
Eto isika dia mahita ny ohatry ny fankatoavana ary toy izao misy maro hafa azontsika ianarana fampianarana manan-danja mandritra ny androm-piainantsika.
Inona no atao amin'ny vavaka?
Mivavaka isika amin'ny fotoana anolorany hitahy ny asa ataontsika ny Tompo. Mba ho ilay Andriamanitra tokana mampitombo ny volantsika, hitari-dalana antsika hanome izany ilay olona mila izany ary hanana izany faniriana izany ao am-pontsika lalandava.
Zava-dehibe ny mahafantatra fa ny fanatitra tsy foana amin'ny vola fa azo atao na inona na inona. Ohatra, mahazatra indrindra ny mahita voankazo na voninkazo dia atolotry ny Tompo daholo.
Ahoana ny fomba hivavahana hahazoana fanatitra kristiana?
Toy izao ny vavaka rehetra, tsy maintsy atao avy amin'ny halalin'ny fontsika sy amin'ny fahafantarana tanteraka izay ataontsika.
Imbetsaka, satria ny fanomezana dia zavatra ara-batana, tsy fantatsika fa fihetsika ara-panahy izany ary fitsipika tsy azontsika hadinoina na oviana na oviana satria Andriamanitra mihitsy no mandray ny fanatitray ary hanome antsika valisoa araka ny hareny. voninahitra.
Ny vavaka aminny fanatitra sy ny ampahafolon-karena dia vita amin'ny finoana, mino fa Andriamanitra mihitsy no mihaino antsika ary izy dia tenany izay manome antsika ny valin'ny angatahinay, na ara-batana na ara-panahy, dia tokony mivavaka hatrany amin'ny fanahy isika ary mifandray mivantana amin'Andriamanitra tanteraka ny Mpamorona mahery sy tompon'ny zavatra rehetra. .